Ezona Consoles zeRetro- iTekhnoloji eyimfashini | Amadoda aQinisekileyo
Ezona Consoles zeRetro zibalaseleyo
UAlicia tomero | | Te knoloji
Ii-Retro consoles zisathandwa kwaye zinemfashini. Inkqubela phambili yethu kwitekhnoloji ayishiyanga ngasemva aba matshini okanye imidlalo yabo yakudala. Kukho izihloko ezindala ezisenza ukuba abantu bathandane nakumaxesha anamhlanje kwaye abanye baphinde bavuselele umnqweno kumaxesha adlulileyo.
Ukuba uthanda ukonwabela olu hlobo lwee-consoles, apha sicebisa uluhlu lwezo sinokuzifumana namhlanje kwintengiso. Zizinto ezingabizi kakhulu zeRetro, ikakhulu isiTshayina, kunye Ukuze sikwazi ukuthenga ngokukhuselekileyo kufuneka sibe nemiba eyahlukeneyo esalindileyo njengonxibelelwano.
1 Yintoni iitroles consoles kwaye kutheni bezithanda?
2 Iiklasi zekhonsoli yeRetro
3 Iindidi zekhonsoli yeRetro
3.1 I-Mega Drayivu ye-HD engenazingcingo
3.2 ISuper Nintendo Classic Mini
3.3 I-CXYP Game Console
3.4 I-Nintendo NES
3.5 I-C64 Mini-Isilivere enzulu
Yintoni iitroles consoles kwaye kutheni bezithanda?
Zizixhobo okanye zizixhobo ezincinci ezithi ikuvumela ukuba udlale imidlalo yevidiyo yakudala naphakathi kwemizobo yayo, xa kufikwa ekumelweni, imidlalo iya kujongwa kwi-2D. Azinanto yakwenza neekhonsoli zangoku, umdlalo ngamnye okanye ekwabelwana ngazo buqu, into engenzekiyo kwezi zale mihla, apho umdlalo unokuba uninzi kunye nakwi-Intanethi.
Iimpawu zeRetro ezinje kuba zitshiphu, zithatha indawo encinci, kulula ukuzisebenzisa, zilayisha ngokulula kwaye ziyaqwalaseleka kakhulu. Banokufikelela kwimidlalo yeklasikhi ebathandayo bonke ubomi babo, nangona uninzi lwazo lunomda womdlalo.
Iiklasi zekhonsoli yeRetro
Sifumene iintlobo ezintathu zekhonkco le-retro, kodwa ezona sizithandayo zezona zokuqala, ezicocekileyo ngokucacileyo ziyazithanda.
Iingqungquthela zangaphambili ze-retro: zezona zisemthethweni ezize kwintengiso kuhlobo lwazo lokuqala kwaye ngoku zithengiswa ngesandla esele zisetyenzisiwe. Abanye bade baphumle kwiipakethe zabo zokwenyani kwaye banokuba nexabiso eligqithisileyo kwimarike.
I-Retro consoles ikhutshwe kwakhona: Ziye zaphindaphindwa zilungiswe zinemilo efanayo kunye neempawu ezinje ngezakudala, kodwa zinoyilo oluncomekayo ngakumbi kunye nemidlalo efakwe kwangaphambili.
I-Retro Chinese kunye neeConsole eziphathekayo: Yinguqulelo encinci kakhulu, eyenziwe ngenkqubo ethile kunye nokubonelela ngamawaka emidlalo. Kwelinye icala, siyabona ukuba kukho iindidi ezininzi kwaye zibiza kakhulu epokothweni nangona zinokuba sengozini yokubandezeleka ngenxa yokoyikwa lag input.
Iindidi zekhonsoli yeRetro
I-Mega Drayivu ye-HD engenazingcingo
Ushicilelo lwayo lwenziwe lwala maxesha, kunye ne-16 bits kunye nemveliso ye-HD kunye nonxibelelwano lwe-HDMI. Iza ixhotywe ngemidlalo ye-Mega Drive / yeGenesis kunye naphantsi kwelayisensi evela eSega. Inezilawuli ezimbini ezifanayo kakhulu nezakudala, ngamaqhosha ama-6 afana nezinye iinguqulelo kunye nengcingo.
Inecandelo le ungafaka iicartridge zangaphambili kwaye iqinisekisa isisombululo se-HD 720p. Iqulethe Umsebenzi wokugcina, ukuqala kwakhona nokubuyisela umva kwinkqubela phambili yomdlalo. Eyona midlalo yakhe yaziwayo yiGolden Ax okanye Alga Beast saga okanye iMortal Kombar ephekiweyo okanye iStrato Fighter.
ISuper Nintendo Classic Mini
Umvelisi wayo waseJapan ongumlingisi we-16-bit uNintendo wayefuna ukukhuphisana neMega Drayivu, enye i-Sega's 16-bit console, kwaye iyenzile. Inguqulelo ephuculweyo kodwa igcina phantse uyilo olufanayo, kodwa kuguqulelo oluncinci.
Kubandakanya izilawuli ezimbini ezinoyilo olufana ncam nesihlanganisi esifanayo. Yenzelwe ukuba idityaniswe ngentambo I-HDMI kunye namandla e-USB. Izipesheli Imibala engama-32.000 kunye nemizobo eneenkcukacha ezintle kunye neekhatriji ezingama-32 megabytes, ezinokhetho lokugcina umdlalo kwaye uwubuyise nangaliphi na ixesha.
Imidlalo yakudala esinokuyifumana liLizwe leDonkey Kong, Igqala likaZelda, uMario Bros kunye nogqatso lomdyarho olumnandi, uMegan Man X, uYoshi's Island okanye iSuper Castlevania IV.
I-CXYP Game Console
I-retro kunye nekhonsoli encinci ephathekayo yenyani enkulu. Ngumatshini othengiswe kakhulu obandakanya ukuya kuthi ga kwi-10 emulators zangaphambili ezifakiweyo zezona zinto zidumileyo ezifana neNeo Geo, iSuper Nintendo okanye iMidlalo yoMfana.
Iza ilungiselelwe ibamba ukuya kwimidlalo engama-3000 kwaye inokudityaniswa kumabonwakude. Ibandakanya ukwahluka okubanzi kweefomathi, kubandakanya ikhamera ngasemva kunye nesandi sayo sinokwenziwa ngokwezifiso.
YiClassic Mini console, incinci kakhulu kunentsusa kwaye ufuna ukukhumbula ukuqala kwemidlalo yevidiyo, Kuba yayiyenye yeekhonsoli zokuqala ezavulwa emarikeni.
Kuthengiswa nge-remote kodwa ungasebenzisa i-remote ye-classic okanye uthenge indawo yesibini ekude. Iimpawu ezintsha ezibandakanya ukuba ungaqhubeka nomdlalo apho ushiye khona ngenxa yezithuba ezine zokumiswa komdlalo ngamnye onawo.
Unokukhetha phakathi kweembono ezahlukeneyo: phakathi komfanekiso wesisombululo sokuqala kunye nomfanekiso womdlalo wokuqala njengoko uyilelwe okanye ngomfanekiso we-4: 3 ovela kwimvelaphi yeNES ngokutsala okuthe tyaba.
Ibandakanya imidlalo yeklasikhi engama-30, phakathi kwayo sineDonkey Kong, iSuper Mario Bros, iLengend yeZelda, iBubble Bobble, iNdali yokuGqibela okanye iPac-Man.
I-C64 Mini-Isilivere enzulu
Le khonsoli ibe yimpumelelo enkulu kwintengiso kwii-1980s. Yimbonakalo yekhompyuter yeCommodore 64 eyayineememori ezingama-64 Kb I-RAM kunye neklasikhi yabathandi be-retro, ene-Joystick yayo yoqobo.
Iza nemidlalo efakwe kwangaphambili engama-64 apho siza kufumana ezakudala zemidlalo, iiphazili, imidlalo yeqonga kunye nabadubuli. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngemidlalo yabo? Ungangena inkcazo yemveliso ngokungena kule khonkco kwaye uya kufumana wonke umxholo wayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » yokuPhila » Te knoloji » Ezona Consoles zeRetro zibalaseleyo